Magaalada Muqdisho Oo Saakay Si Weyn Looga Ciidayo – Radio Muqdisho
Magaalada Muqdisho Oo Saakay Si Weyn Looga Ciidayo
Maalinta koowaad ee ciida carafo ama ciidul Adxa ayaa maanta magaalada Muqdisho dadka ku dhaqan waxa ay u dabaal dagayaan munaasabadda maalintani oo ah maalin umadda Muslimiinta Ah ku weyn.
Caruurta ayaa lagu Arkayaa iyaga oo Wajiyadooda ay ka muuqdaan Farxad,wadooyinka waa weyn ee Magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Sidoo kale Dadka waa weyn ayaa iyaganuna Camiray Masaajidyada si ay u Tukadaan Salaada Ciida.
Dhanka kale waxaa jira Dad ku nool Muqdisho oo u badan Qoysaska Barakacayaasha oo Caruurtooda iyo iyaguba aysan ka muuqan Damaashaadka Maalinta Koowaad ee Ciida,kuwaas oo ay haysato wax la’aan waxaana loo baahan yahay in Qof walba oo Muslim ah Allena uu Wax siiyay in ay Gargaaraan.
Gobolada Dalka Oo Si Isku Mid ah Looga Ciiday